Phoe Htaung (ဖိုးထောင်): 2006
Welcome everyone, please visit my blogs and share experiences.
Posted by Phoe Htaung at 6:16 PM No comments:
Raining in SG
စင်ကာပူမှာ မိုးတွေ နေ့တိုင်းရွာနေတယ်.. အဆိုးဆုံးကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားပေါ့. ခုထိ အင်ဒိုမှာ လူ ၁၀၀ ကျော်သေသွားပြီ.. အိုမဲ့အိမ်မဲ့တွေလည်း အများ ကြီးဖြစ်နေကြပြီ.. မိုးကလည်း တိတ်မဲ့ပုံမပေါ်သေး...
ဖိုးထောင်တို့ မြန်မာပြည်ကတော့ သဘာဝဘေးအန်တရယ် နည်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့..ကံကောင်းတာပေါ့ဗျာ...
အဲ ဒါပေမဲ့ သဘာဝဘေးအန်တရယ်ထက် လူလူချင်း ဒုက်ခပေးနေတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါ..
ဆင်းရဲလို့ တခြားတိုင်းပြည်ကို အလုပ်သွားလုပ်ချင်လို့ မရှိ ရှိတာရောင်း၊ အတိုးနဲ့ ငွေချေးပြီး သွားချင်တဲ့လူတွေဆီက ငွေကို လိမ်တာတွေလည်းအများကြီးကြားနေရတယ်
ပီအမ် ကုမ်ပဏီ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မြသောင်းဝေ တစ်ယောက် ကားပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယဆုရတာ တော်တော်များများ သိကြပေမဲ့ ဒေါ်မြသောင်းဝေ လူနှစ်ရာကျော်ဆီက တစ်ယောက် ငွေ ၁၀ သိန်းလိမ်သွားကိုတော့ သိတဲ့လူတော်တော်နည်းတယ်..
ကားပြိုင်ပွဲ ဆုရတုန်းက တီဗွီ ကလည်းလွှင့်၊ သတင်းစာ ၊ ဂျာနယ်ထဲမှာလည်းထည့်တယ်တဲ့..လိမ်သွားတာက ဘယ်သတင်းမီဒီယာကမှ မဖော်ပြကြဘူး..
အားလုံး သဘာဝ ဘေးအန်တရယ်ရော လူအန်တရယ်ရော ကင်းကြပါစေ။
Posted by Phoe Htaung at 8:50 PM No comments:
How big Difference?
နိုဘယ်လ်ဆု ကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း သိကြမှာပါ.. မကြာသေးခင်ကပဲ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ဖိုးထောင်တို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်က စီးပွားရေး ပါမောက်ခတစ်ယောက်က ရသွားပါတယ်.. ဆုလဲယူပြီးသွားပါပြီ။ ဖိုထောင် သူ့ကိုလေးစားမိပါတယ်..ဒီဆုကို သူထိုက်ထိုက်တန်တန်ရခဲ့တာပါ..ကမ်ဘာမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်က လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲမွေတေမှုကလဲ တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်.. နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရသွားတဲ့ စီးပွားရေး ပါမောက်ခဟာ ဆင်းရဲမွေတေမှုကို တိုက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေသူပါ..တော်တော်လေးလဲ အောင်မြင်နေပါပြီ။ ဆင်းရဲတဲ့ ဘယ်သူကို မဆို အတိုးနှုံးနည်းနည်းနဲ့ ငွေချေးပြီး ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနေသူပါ..ခုဆို နိုင်ငံအတွင်း ကျေးရွာပေါင်းများစွာ မှာ သူ့ဘဏ်တွေ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဆင်ရဲသားများကို ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်အောင် ကူညီပေးလျှက်ရှိပါတယ်..
ဆင်းရဲမွေတေမှု ကို မတိုက်ဖျက်နိုင်ရင် ဘယ်လိုမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ နိုဘယ်ဆုပေးရေးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်..ဒါကြောင့် ဆင်းရဲမွေတေမှုကို တိုက်ဖျက် အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေး ပါမောက်ခ မိုဟာမက် ယိုးနပ် ကို နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးမြင့်ခဲ့တာ ပါလို့ ဆိုပါတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက် က RFA သတင်းထဲမှာ စိတ်မကောင်းစရာ ကြားခဲ့ရပါတယ်.. အလုပ်သမားဝန်ကြီးငှာနက တရားဝင်လိုင်စင်ရ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေးဂျင့် တစ်ခု က ဂျပန်သွားအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ လူနှစ်ရာကျော်ဆီက တစ်ယောက်ကို မြန်မာငွေ ၁၀ သိန်းဆီ ဂျပန်ကို ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီ လိမ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်..နေ့ရွေ့ ရက်ရွေ့ နဲ့ ဂျပန်ကိုလဲ မပို့နိုင် ၊ စရံငွေကိုလဲ ပြန်မပေးနိုင်လို့ ရဲစခန်းကို အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..ခုထိတော့ ရဲစခန်းက ဘာမှလုပ်မပေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်..ကုမ်ပဏီပိုင်ရှင်ကလဲ တိုင်ချင်ရာတိုင်လို့ ပြောကြောင်း အလိမ်ခံရတဲ့ တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်..လိမ်တာကလဲ တခြားလူသာမန်လူမဟုတ်ပါ... စာရေးဆရာ သောင်းဝေဦးရဲ့ သမီးတွေပါ..ဖိုးထောင်တော်တော်လေး ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..အဖက်ဖက်က ကျပ်တည်းနေတဲ့အတွက် အများစုဟာ အဆင်ပြေရာ ပြေကြောင်း ရုံးကန်နေကြရတာပါ..အများစုက သူများဆီက အတိုးနှုံးများစွာ နဲ့ ချေးကြရတာပါ..
ဗုဒ်ဓဘာသာတွေယုံကြည်တဲ့ သံသရာဆို တာကို မေ့နေကြပြီလား။ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် တစ်ယောက် က ဆင်းရဲမွေတေနေတဲ့ လူတွေကို ကယ်တင်နေပေမဲ့..
ဗုဒ်ဓဘာသာဝင် သိက်ခါရှိတဲ့ ယဉ်းကျေးတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတစ်စုက အကျပ်အတည်းများစွာကို လွတ်ရုံးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အဆင်မပြေတဲ့လူတွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လိမ်ညာနေတာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါ..
ကိုယ့်ကိုကို ရွှေလိုခေါ်တဲ့ မြန်မာတွေ...
ကိုယ့်နိုင်ငံကို ရွှေနိုင်ငံလို့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ မြန်မာတွေ...
ကိုယ်လုပ်သောကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ်ထံပြန်လာမည်..
Posted by Phoe Htaung at 6:06 PM No comments:
Dec 6, Phoe Htuang's Birthday...
ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ ဟာ ဖိုးထောင်ရဲ့ ၃၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပါ...
မောင်ဖိုးထောင်တစ်ယောက် မသေခင် မိသားစု နှင့်တူ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ပါစေ။
နိုင်းနိုင်းစနေ ဘဘော့ဂ်ထဲက ကဗျာလေးကို အားကျလို့
ကဗျာလေး မရေးတတ် ရေးတတ် ရေးလိုက်ပါတယ်..
ဖိုးထောင်သည် အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ချင်သည်..
ဖိုးထောင်သည် အမျိုးတစ်ထောင်ကို ကျွေးချင်သည်...
သို့သော် ခုထိ မကျွေးနိုင်သေးပါ..
ဖိုးထောင်သည် ကမ်ဘာ အနှံ လျှောက်လည်ချင်သည်..
သို့သော် ပိုက်ဆံ အလုံအလောက်မရှိသေးပါ..
ဖိုးထောင် ၌ ပြောစရာတွေ အများကြီးရှိသည်..
သို့သော် ဘာပြောရမှန်း မသိပါ...
Posted by Phoe Htaung at 7:52 PM4comments:
Thai King's Birthday....Why Thai people love him so much?
ဒီနေ့ဟာ ကမ်ဘာမှာ နန်းသက် အရှည်ဆုံး နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှု ကို အပြည့်အ၀ရရှိတဲ့..ထိုင်းဘုရင်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ..
ထင်ရှားပါတယ်... မေတ်တာ ကိုဝယ်ယူလို့မရပါ။ မေတ်တာ ကို မေတ်တာနဲ့ပဲ လဲလှယ်လို့ရပါတယ်..
ထိုင်းဘုရင်ကို မလေးစား မထေမဲ့မြင်ပြုတဲ့ စကားမျိုး မေးခွန်းမျိုး ကို သွားမမေးပါနဲ့ အန်တရယ်ရှိပါတယ်..
ဖိုးထောင်လဲ ထိုင်းဘုရင်ကို လေးစားမြတ်နိုးမိပါတယ်...
စိတ်ဝင်းစားလို့ သူ့အကြောင်းကို လေ့လာမိပါတယ်... တကယ်ပဲ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးပါ..
Posted by Phoe Htaung at 10:47 PM No comments:
Posted by Phoe Htaung at 7:52 PM No comments:
There is Burmese boy who created fantastic music. Listen and vote for him.
Here you can listen his song..
Listen Burmese Boy's music
Then vote here: don't miss the name.
Mg Phoe Htaung
Posted by Phoe Htaung at 2:21 AM No comments:
First time talking with Father after 15 years.
ဖိုးထောင် နဲ့ အဖေ စကားမပြောဖြစ်ခဲ့တာ ၁၅ နှစ်ကျော်ပြီထင်တယ်..လွန်ခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ က ပထမဆုံးအကြိမ် ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်..ဖိုးထောင် ၁၂ နှစ်သားလောက်ကတည်းက အဖေ နဲ့ အတူမနေပဲ အဒေါ်မိသားစုနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့တယ်ဆိုပါတော့..စကားမပြောဖြစ်တာက ဖိုထောင်မှာ အဖေ့အပေါ် နားကျည်းစရာတွေရှိခဲ့လို့ပါ..ဖိုးထောင် သေတဲ့အထိ မေ့ပျောက်လို့ ရမယ်မထင်ဘူး။
ဖိုးထောင်တို့ မိသားစု ကို ထမင်းနပ်မှန်အောင် မကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အဖေ..
အမေကို နေ့တိုင်းလိုလို နှိပ်စက် ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ အဖေ..
အများတကာ အလည်မှာ မျက်နှာငယ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အဖေ..
သာမန် ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်တွေကို မကျေပွန်ခဲ့တဲ့ အဖေ..
ဖိုထောင်ခြုံတဲ့ စောင်၊ ဖိုးထောင်အိပ်တဲ့ သင်ဖြူး ကိုတောင် ရောင်းစားခဲ့တဲ့ အဖေ..
ဖိုးထောင်တို့ မိသားစု မှာ ဘာအပြစ်ရှိခဲ့လို့ လဲ....
အဖေ အပြစ်မဲ့တို့ ကျွန်တော်တို့ အပါ် သိပ်ရက်စက်ခဲ့တယ်..
ဖိုးထောင် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ပါ...
နောင်ဘ၀ ဆက်တိုင်းမှာ ရက်စက်တဲ့ အဖေ နဲ့ မကြုံရပါစေနဲ့လို့ ဖိုးထောင်ဆုတောင်းပါတယ်..
သပ်ဗေ သတ်တာ ကံမ သကာ
Posted by Phoe Htaung at 11:09 PM5comments:
Thaw Lynn Thit's Donation
Thar Du, Thar Du, Thar Du....
Posted by Phoe Htaung at 3:52 PM No comments:
Is Phoe Htuang Lucky for this?
စင်ကာပူမှာ အိမ်ရှင်တွေက အိမ်ငှားတွေကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ မကြာခဏကြားရတယ်ဗျ၊ အိမ်ငှားအလုပ်သွားနေတုန်း အိမ်ရှင်က ၀င်ကြည့်တာ. ဟိုဟာ မလုပ်ရဘူး ဒီဟာ မလုပ်ရဘူး စသဖြင့် ကန်သတ်တာတွေကြောင့် အိမ်ငှားတဲ့လူတွေ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာ..
ဖိုးထောင်တော့ အခုထိ ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ..ဖိုးထောင်အိမ်ရှင်က တခါမှာ အိမ်ကို လူရှိတဲ့အချိန်ရော မရှိတဲ့အချိန်ရော လာမကြည့်ဘူး..လမ်းမှာတွေ့ရင်လဲ တကယ် ခင်မင်တဲ့ အပြုံးနဲ့ ဆက်ဆံတယ်..ခုတလော အိမ်ငှားရတာ သိပ်မလွယ်ဘူးကြားတယ်.. မလွယ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနဲ့ နေရာနဲ့ ရဖို့ရာ အချိန်ပေးရတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ..သိပ်မကြာခင်မှာ အစိုးရက အခွန်နှုံး ၅ % ကနေ ၇ % အထိတိုးဖို့ လမ်းကြောင်းနေပြီလေ..သေချာတာက အားလုံး ဈေးလိုက်တက်မှာပါပဲ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..လောလောဆယ်တောာ့ ဖိုးထောင် အတွက် အိမ်းငှားတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်တာပေါ့ဗျာ.
Posted by Phoe Htaung at 10:57 PM No comments:
Today is my son's one year birth day. He is celebrating his birthday in Myanmar with his grandmother family. Phoe Htuang is away....
Posted by Phoe Htaung at 4:25 PM5comments:
Lazy Phoe Htaung..:(
ဖိုးထောင် ဒီနေ့ အလုပ် လုပ်ရတာ သိပ်စိတ်မပါဘူး။
မနက်ဖြန်ဆို ဖိုးထောင်ရဲ့ သားလေး တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေ.. ဖိုးထောင်နဲ့က ဝေးနေတော့ သားမွေးနေ့ ကို မတက်ရောက်နိုင်ဘူး..
ဖိုးထောင်မှာ သားတစ်ယောက်၊ မယားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်..
ဖိုးထောင် သားကို လွမ်းတယ်ဗျာ...တကယ်ပဲ..
Posted by Phoe Htaung at 5:36 PM 1 comment:
Reason of Dishonest..?
ဆင်းရဲလို့ မရိုးသားတာလား၊ မရိုးသားလို့ မရိုးသားတာလား..
၂၀၀၁ ခုနှစ်လောက်တုန်းက ဖိုထောင် ဘိလပ်မှာ ရှိနေတုန်း.. အတူနေ သူငယ်ချင်းရဲ့ မိတ်ဆွေ စင်ကာပူနိုင်ငံသူ မြန်မာလူမျိုး နဲ့ ဘိလပ်မှာ သိခဲ့ရပါတယ်..ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် လန်ဒန်မှာပဲ ခါးပိုက်နိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်..ငွေအပြင် တခြား ကတ်တွေလဲ ပါသွားတော့ တော်တော်လေး အလုပ်ရှုပ်သွားတာပေါ့..
ထိုအမျိုးသမီးက မှတ်ချက်ပေးပါတယ်.. ဘိလပ်က နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပေမဲ့ ခုလိုခါးပိုက်နှိုက်ရှိတာ ရှက်စရာကောင်းတယ်တဲ့..စင်ကာပူမှာ ဆို ဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့... ကြားရတော့ ဖိုးထောင် တော်တော်လေး စင်ကာပူကို အထင်ကြီးမိပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ ဖိုးထောင်အထင်ကြီးမိတာ မှားသွားတယ်ဗျာ..ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဖိုးထောင်ရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာမှ ၃ လတောင်မပြည့်သေးဘူး..ဖိုးထောင် နာရီနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် အခိုးခံလိုက်ရလို့ပါပဲ။ ဖိုးထောင်က နာရီနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖိုးထောင်အိတ်တဲ့ ပြတင်းပေါက်နားမှာ ထားမိခဲ့တာကိုး။ အခိုးခံရလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး။ သူခိုးမရှိဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိလို့ပါ..ဖိုးထောင်အပြင် တခြားလူတွေလဲ အခိုးခံရတာကို ကြားမိပါတယ်..ဒါကြောင့် စင်ကာပူမှာလဲ သူခိုးရှိပါတယ်... ဖိုးထောင်လို သတိလက်လွတ်မထားမိဖို့ သတိပေးပါရစေ။..
ဖိုးထောင်နားလည်မိတာက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု က မရိုးသားမှုကို ခေါ်ဆောင်လာတတ်ပါတယ်..ယနေ့မြန်မာပြည်မှာ ကား နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း ကို ကိုင်ပြီး မရိုးမသား လိမ်နေတဲ့ လူတွေအများကြီးပါ..လူတိုင်းဟာ မရိုးသားမှုကို မနှစ်သက်ကြပါ.. အခြေအနေရ မဖြစ်လွန်းလို့ လိမ်ရင်းလိမ်ရင်း နဲ့ မရိုးသားသူဖြစ်သွားကြတာ အများကြီးပါ..
စင်ကာပူမှာ အလုပ်ရှိ ၀င်ငွေရှိပေမဲ့ ဘတ်စ်ကားခ ကို မပေးချင်လို့ Cheat လုပ်တဲ့လူ..တွေ ဖိုးထောင် မကြာခဏတွေ့မိပါတယ်... ပိုက်ဆံမရှိလို့ မဟုတ်ပါ..
သတိထားပါ... စင်ကာပူမှာ လဲ သူခိုး ရှိပါတယ်...
Posted by Phoe Htaung at 1:49 AM No comments:
Phoe Htaung so SAD....
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ က ဖိုးထောင် NUS မှာ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခဲ့ရပါတယ်. အချိန်ပိုင်း မဟာနည်းပညာဘွဲ့အတွက်ပါ။ ဖိုးထောင်နဲ့အတူ တခြားမြန်မာ ၁၄ ယောက်လောက်လဲ ပါပါတယ်. ဖိုးထောင်ကလွဲရင် တခြားမြန်မာတွေက မြန်မာပြည်ကနေ လာပြီး ဖြေကြတာပါ။ နောက်ဆုံးအသုတ်စစ်တဲ့ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲမို့ ဖြေပြီးတာနဲ့ အောင်တဲ့လူတွေကို လူတွေ့စစ်ဆေးပါတယ်။ ဖိုးထောင်သိသလောက် မြန်မာ ၅ ယောက်ပဲဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်ပြီး အင်တာဗျူးဖြေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်..မြန်မာပြည်က လာပြီး ၀င်ခွင့်မအောင်လို့ ပြန်သွားရတဲ့လူတွေ အတွက် ဖိုးထောင် ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တာက..တချို့က ဒီဘာသာကို ကိုယ်နဲ့ သင့်တော် မသင့်တော် မစဉ်းစားတာပဲ လျှောက်ကြတာပါ..
၀င်ခွင့်မှာ မေးတာက ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်း၊ IT Project Management, Maths, Logic, Programming English, and Reasoning..တွေပါ..
Programming ကို ဘာမှနားမလည်တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် အောင်ဖို့ရာ တော်တော် ခဲယဉ်းပါတယ်..ဒါကြောင့်လဲ အများစု မအောင်ပဲ ပြည်တော်ပြန်ကြရပါတယ်..ဖိုးထောင် အရင်တုန်းကလဲ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်.. ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဘာသာ၊ ကိုယ်အားထုတ်လို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဘာသာ ကို လျှောက်သင့်ပါတယ်..
အောင်စာရင်းမထွက်ခင် စိုးရိမ်တဲ့ မျက်နှာတွေ ကို ဖိုးထောင်မြင်ခဲ့ရလို့ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါ. ထပ်ပြောချင်ပါတယ်.. ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိပဲ ဘာမှ လွယ်လွယ်ဖြစ်မလာပါ..မြန်မာပြည်က လာပြီးဖြေရတာ မလွယ်ပါ.. ကုန်ကျစရိတ်က လဲ သာမန်လူတွေအတွက် များပါတယ်.. တချို့ကလဲ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရတယ်ဆိုပြီး အရမ်းမျှော်လင့်တာကို တွေ့ရပါတယ်.. အရမ်းမျှော်လင့်ပြီးဖြစ်မလာတော့ ပိုစိတ်ဆင်းရဲ ရတာ သဘာဝပါ..ဖိုးထောင်က စပ်စပ်စုစု မေးမိပါတယ်.. သူတို့ရဲ့ နောက်ခံ ပညာရေးအကြောင်းပါ..ဖိုးထောင်မေးတဲ့ နှစ်ယောက်လုံးက ကွန်ပျူတာ ဘက်ဂဒေါင်းက မဟုတ်ကြပါ။ ကွန်ပျူတာဘက်က လာတဲ့လူမှ လျှောက်သင့်တယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ..၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာ Programming သိကိုသိမှ အောင် နိုင်မှာပါ..တစ်ယောက်ကပြောပါသေးတယ်.. သူက မြန်မာပြည်မှာ PhD အကြိုသင်တန်းတက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ သူရဲ့ ဆရာက ဒီမာစတာကို လျှောက်လို့ အပြစ်တင်နေကြောင်း၊ တကယ်ဆို Research အဆင့်လောက် လျှောက်သင့်ကြောင်း ဂုဏ်ယူတဲ့ လေသံနဲ့ပြောနေပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ ထိုမိန်းကလေး ၀င်ခွင့်မအောင်ခဲ့ပါ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှိထက် ပိုပြီး ထင်နေပါတယ်..မဖြစ်သင့်ပါ။ ဖိုးထောင်သိသလောက် မြန်မာပြည် အင်တာနက်ကို တောင် ကောင်းကောင်းမသုံးရပါ။ စာကြည့်တိုက်မှာလဲ တကယ်ရှိသင့်တဲ့ Up to Date စာအုပ်တွေလဲ ရှိသင့်သလောက်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်. အဲဒီအခြေအနေနဲ့ PhD ကျောင်းသားတွေရဲ့ အဆင့်အတန်း တွက်ဆကြည့်နိုင်ပါတယ်..လူငယ်တွေ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာရှာတဲ့ အခါ..
မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို သေသေချာချာ ရွေးချယ်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ ဖိုးထောင် အကြံပေးပါရစေ။
Posted by Phoe Htaung at 4:53 PM No comments:
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာရှာလိုတဲ့ မြန်မာ လူငယ်များ ကို ကျွန်တော်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အကြံဥာဏ်လေးတွေပေးချင်ပါတယ် မြန်မာလူငယ်တွေ တခြားနိုင်ငံမှာ ပညာရှာကြတာ တနေ့တခြား ပိုများများလာပါတယ်. တချို့လူငယ်တွေ ပညာသင်ရာမှာ အခက်အခဲများစွာ တွေ့ရတာ ကို မကြာခဏ ကြားမိပါတယ်. .အခက်အခဲတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်သလဲ စတာတွေကို ဖိုးထောင် ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်.
အဖက်ဖက်က ချွတ်ချုံကြနေတဲ့ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေအရ လူငယ်တွေအများစုဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသလိုခံစားနေကြရပါတယ် ဒါကြောင့်တနည်းမဟုတ်တနည်း နိုင်ငံခြားမှာ ပညာဆည်းပူးဖို့ အခွင့်အလမ်းရအောင် ကြိုးစားကြပါတယ်
တချို့လူငယ်တွေက နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ခွင့်ရရင် ငါတို့ အတွက်အားလုံး အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီထင်နေကြပါတယ်.. ဖိုးထောင်အမြင်ပြောရရင် လူတိုင်းဟာ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိရင် ဘယ်အရာမှ အလွယ်တကူ ဖြစ်မလာပါဘူး..စင်ကာပူမှာ ပညာရှာနေတဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်..ခုတလောကြားနေရတာက မြန်မာကျောင်းသားတချို့ ပထမပတ်စာမေးပွဲမှာ ရှုံးတဲ့ သတင်းပါ..အကြောင်းရင်းက ဘာလဲဆိုတတော့ မြန်မာပြည်က ပညာင်ကြားရေးစနစ်နဲ့ ဒီက စနစ်က ကွဲပြားတာကို..အံဝင်ဂွင်ကြမလိုက်နိုင်တာရယ်.. ကိုယ်လေ့လာမဲ့ ဘာသာရပ်အတွက် သေချာမပြင်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်လို့ ထင်မိပါတယ်..တခြားအကြောင်းအရာတွေလဲရှိပါသေးတယ်..တချို့ကျောင်းသားတွေက စာမေးပွဲမှာ မေးတဲ့ ပုံစံကို အပြစ်တင်ကြတယ်....မြန်မာပြည်လို မဟုတ်ဘူးပေါ့..
နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ဖို့လာမယ်ဆိုရင် ဖိုးထောင် အကြံပေးချင်တာက ဒီလိုပါ..
(၁) လက်လှမ်းမှီသလောက် ကိုယ်သွားမဲ့ နေရာ၊ ကျောင်းမှာရှိတဲ့ လူတွေကို အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ..
ဘာတွေအခက်အခဲတွေ့နိုင်သလဲ. ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ.. သင်ကြားရေးစနစ် စတာတွေကို မေးပါ..
ပညာသင်ကြားရေးစနစ်မှာ လဲ ဖိုးထောင်သိသလောက်ပြောရရင်..မြန်မာပြည်က ပုံစံနဲ့ ကွာခြားပါတယ်.. မြန်မာပြည်မှာက အလွတ်ကျက်ဖြေကို အားပေးပါတယ်..တခြားနိုင်ငံမှာက ဘယ်လောက်နားလည်လဲ..ဘယ်လောက် တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်သလဲ.. ဆိုတာကို ဦးတည်ပါတယ်..ကိုယ့်အမြင်.. အတွေးအခေါ်ကို ထုတ်ဖော်ခိုင်းပါတယ်.. မကြာခဏ Presentation လုပ်ရပါတယ်..မြန်မာလူငယ်ကျောင်းသားများက ရှေ့ထွက်ပြောရတာ အတွေ့အကြုံနည်းတာရယ် English မှာ အားနည်တာရယ်ကြောင့်..ရှေ့ထွက်ပြောရမှာကြောက်ကြပါတယ်..အဲဒီတော့ အမှတ်က ရသင့်သလောက် မရတော့ဘူးပေါ့..ဖိုးထောင်ရဲ့ ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကတော့ ဒူးတွေတုန် အသံတွေတုန်ခဲ့တာပါပဲ။..နောက်တော့လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်လာရင်းနဲ့ ခုတော့ မဆိုးတော့ဘူးပေါ့.
(၂) ဘာသာရပ်ကို သေချာရွေးချယ်သင့်ပါတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကပဲ မြန်မာကျောင်းသူတစ်ယောက် သင်ကြားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို မလိုက်နိုင်လို့နေ့တိုင်းငိုနေတယ်လို့ ကြားခဲ့ရတယ်.. တချို့ က ကျောင်းတက်ခွင့်ရရင်ပြီးရော၊ ဘယ်ဘာသာပဲ သင်ရသင်ရ သင်မှာပဲဆိုပြီးလာကြပါတယ်.. တကယ်လဲကြတော့ ကိုယ်ထင်တာနဲ့ လက်တွေ့ ကွာခြားပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေကြရတယ်..သင်ယူရမဲ့ဘာသာရပ်ကို တကယ်လိုက်နိုင်မလိုက် သေချာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်..မိမိကိုယ်ကို သိအောင်းကြိုးစားသင့်ပါတယ်....ဆိုလိုတာက ကိုယ်က ဘယ်ဘာသာကိုတော့ လိုက်နိုင်တယ်.. ဘယ်ဘာသာကတော့ လက်လှမ်းမမှီနိုင်ဘူး စသဖြင့်..
(၃) လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
သေချာတာက လူမျိုးတစ်မျိုး နဲ့ တစ်မျိုး ယဉ်ကျေးမှုခြင်း.. ယုံကြည်မှုချင်း ကွားခြားကြပါတယ်..ကွာခြားတဲ့ အလျောက်..ငါ့ယဉ်းကျေးမှုကတော့ ကောင်းတယ်.. ငါ့ဘာသာ ကမှန်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲလမ်းမှုတွေ ဖျောက်သင့်ပါတယ်..တချို့မြန်မာတွေက တခြား လူမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အခက်အခဲတွေ့ကြတယ်..မြန်မာကျောင်းသူလေးတစ်ယောက် ပြောတာ ကြားမိလို့ ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်..သူ့နဲ့ ကျောင်းအတူတူ အတန်းတူတူ တက်တဲ့ တစ်ယောက်ကို ပြောနေတာပါ..
.."အတန်းထဲမှာ ငါလေ ဘယ်သူကို မှ ခင်လို့မရဘူး. နင်ကိုတော့ ငါခင်ပါတယ်..အိမ်မှာဆိုလဲ ငါဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောချင်ဘူး.. တစ်နေ့တစ်နေ့ အိမ်ကိုပဲလွမ်းတယ်.. ဒီကလူတွေက တမျိုးပဲ.. ငါ့အိမ်မိသားစုတွေနဲ့ တခြားဆီပဲ..ငါဘယ်လိုမှ မပျော်ဘူး.. အိမ်ကိုပဲပြန်ချင်တယ်..ငါ့ဘယ်လိုနေရာကိုရောက်နေလဲ ငါ့ကိုငါ နားမလည်နိုင်ဘူး"
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာက လူတွေနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ဖို့ ပြုပြင်ပြောင်လဲမှု တွေ အနည်းနဲ့ အများလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်..ဒါမှာသာ ပညာင်ကြားရာမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့မှာပါ..
သူများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုလဲ ကိုယ့်သဘောမကျတိုင်း အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူး..ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်တုန်းလုံး ရေပူစိမ်တာကို သီရိလင်ကာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အရှက်မရှိဘူးလို့ ဝေဖန်ပါတယ်..ရှက်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ မလုပ်ရင်နေပါ..အဲဒီလို သွားပြီး ပြောတာမကောင်းပါဘူး..မပြောလဲ မပြောသင့်ပါဘူး..
..(၃) အတိတ်က အကြောင်းအရာတိုင်း မသယ်လာသင့်ပါဘူး
တချို့ကျောင်းသားတွေ မြန်မာပြည်မှာ အဆင့်ကောင်းကောင်းရခဲ့ပေမဲ့ နိုင်ငံခြား ပညာသင်တော့ ကောင်းကောင်းမလိုက်နိုင်လဲ့ စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်လို့ကြားမိပါတယ်..လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မလုပ်ရင် မရနိုင်ပါဘူး.. တခြားတော်တဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေလဲ..အများကြီးပါ..သူတို့ဘာလို့တော်လဲ.. ကိုယ်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ.. သေချာစဉ်းစား အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုပါတယ်.. အတိတ်က ရတိုင်း ခုရရမယ်ဆိုတဲ့ အစွဲအလမ်းမထားသင့်ပါဘူး..
"ရပ်ဝေးမြေမှာ ပညာရှာ" အစီအစဉ်ကို နားထောင်သင့်ပါတယ်..
သင့်သလို နောက်မှ ထပ်ဆွေးနွေးပါဦးမယ်..
Posted by Phoe Htaung at 7:32 PM5comments:
ကျွန်တော်က ဘလော့ဂါ အသစ်ပါ..သူများတွေကို အားကျလို့ ..ကျွန်တော်လဲ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဖလှယ်ချင်လို့ပါဗျာ..
Posted by Phoe Htaung at 7:24 PM No comments:
Phoe Htaung"s Bio
I am Phoe Htaung, working in Singapore by chance.
Thai King's Birthday....Why Thai people love him s...